November 2019 – DINAGDDEE.COM
Commentary Current Affairs Opinion Politics
In the middle of one night Miss Clavel turned on the light And said, “Something is not right!” – “Madeline,” by Ludwig Bemelmans, 1939 (As quoted by Ruth Marcus, Deputy editorial page editor, Washington Post, May 26, 2017) I listened to Obboo Lemma Megarsa’s interview with VOA and felt exactly Read more…
Afan Oromo Article Commentary
Saba Oromo Attamiti Magaleesina?
Magaaloota gugurdoon Ethiopia keesa jiran harkii caaluu Oromia keesa jiru, Finfinee dabalatee. Garuu Oromian haa magaaloftu malee, sabni Oromo amma eegamu magaaloota Oromia keesa qubatee hin jiru. Kuni maaliif akka ta’ee beekamadha, seena Oromo wagga 150n darbaan yoo xinxalee deebii argganna. Kan tau’uu ta’ee amma bakka jiru jira. Maal yoo Read more…